BAKKA DR/ MOHAMMED RASHAAD KABIIR ABDULLEE
Hiikkaa Qur'aanaa Kan Afaan Oromo'ooti ......Sagalee Dr. Sheekh Muhammad Rashaad
GORSA KAN JOOLLEE OROMIYAA
Duuba warri dur gaallan gaafa humna qabdu miite gaalla humna dhabde argatanii biyya gaalla'aa tan isaanitti aantutti duulanii, cabsanii gaallaa walii hin dirmanne arganii, ammas biyya gaala'a taanitti siqan hanga biyya gaalla'aa hunda qabatanitti. hanga waan isaan biyya gaalla'aa godhan hunda , akkaataa isaan itti cabsan hunda, akka itti isaan gabroonfatan hunda, barreessanii ilmaan isaanii barsiisanitti. hang Waan isaan biyya gaalla'atti dalagan hunda, taareiikhni addunya'aatifii, taariikhni warra gaalla'aafii biyya gaalla'aa gabroonfate barreessetti . kan waa takka irraa hin dhiisin. maqaa isaanii kan gaafa san qabaniin barreessan, sun: (gaallaa) jechu'u.
Duuba ilmaan oromo'oo waan warri abbootii isaanii gabaroonfate barreesse, dubbisanii yookaa qara'anii, akkasuma waan taariikhni addunya'aa gaalla'aafii warra gaallaa gabroonfaterraa barreesse, yookaa katabe, biyy alatti qara'anii yookaa dubbisanii, hoggaa biyya isaanitti deebi'an kan akka taaddasaa birru'uu, ummata isaanii waan dhuysa'aan alatti baratn kan taariikha Gaalla'aa yookaa oromo'o'tti rarra'u, ummata isaanii barsiisan dhoysa'aan. maaliuf mangistiin akkasitti abbootin isi'ii gaallaa miite taariikha gaalla'aatifii aadaa isaanii baratanii barsiisuu dhiisii maquma gaalla'aatuu maqaa dhawuu hin feetu hin eehamtu.
Haa tayuu dargaggoon oromo'oo ta maqaa mangistii isaan gabroonfattuutin biyya alatti waa barateefii tan biyya keessatti taariikha Gaalla'aatiifii, taariikha warra isaan gabroonfatuu qorattee laaltu akkasuma ummanni bal'aan, kan akka Mangistuu nawaay, kan akka janaraal taaddasaa birru'uu , kan akka tuuroo abdulle'ee, ammallee warri biraa hedduun, Mangistii isaan bulchituun, ummanni gaalla'aa miidhama guddaa keessa jiraa, haqa biyyaa kan isaan haqa godhatan kenna'aaf, sanirraa afaan isaan akka baratanii barsiisanii ittiin dalagan godha'aaf . afaan isaanii Radiyoona seensisaa ja'anii irra barbaannan mangistiin dhiira oromo'oo saniin akki jette: mee amma eegu waan akkanaa kana barbaadaa. waan akkanaa barbaadun, ummata isyoobiyaa keesa jiru hunda, waan akkana barbaadu'utti kaasuu jea'amaa mitii? jennaanin wanni je'aniin ummata xiqqa'aa jecha, ummata bal'aa miidhun wahi akkaa? hayn'i yookaa dhugaan ummanni bal'aan, ummata xiqqa'aa je'ee, haqa isaa hin dhabu. ummanni xiqaanis ummata bal'aa keessatti, haqa isa fakkaatu hin dhabu. maalif ummnni bal'aan yoo haqa isaa argatee, qalbii takkaan hin dalagin, bitti hin hortu .duuba gaafas ummnni biyya, xiqqaadhaa guddaan, ni rakkata.maalif hormaanni dalaga'atti haajama dalagaan beekkomsatti haajamti. duuba ummanni bal'aan, yoo warra biyyaa bakka afuritti qoonne harka sadii gayu, yoo afaan isaanitiin, baratu'urraa hoongayee, wallaalatti hafe maal dalaga? ummanni xixiqqaan ummata bal'aa waan beeyne keessatti, odoo hangamuu waa baree, yoo isti'maara gabbisuu taate malee, biyyaafii ummata bal'aadhaa bu'aa hin fidu, mee ummata xiqqaa kibba afrika'aa keessa jiraatuu ture, adaadii laali, ummata bal'aa waan beyne , kan haqa isaa dhabeef, maal tare? maal fayyade? maal bu'aan isaan biyya sanii fidan? ammoo eega ummanni bal'aan, biyya sanii, haqa argatee, haqa isaanitiifii, haqa nama birallee baratee, ummanni bal'aadhafii, ummanni xiqqaan, biyya sanilleen qoofe. Roodiisiyaanis akkasuma.
Ammallee mangistiin ummata xixiqqaa ummata bal'aa dura dhaabdu, tan dantaa ummata bal'aadhaa, qooqa gosa xixiqqo'ootin, balleessitu yookkaa kuffiftu ,isiin haala isti'maararratti deemti. maalif mangistii haqaa biratti hayn'i ummta bal'aadhaa, durfamuu qaba. akkuma hayn'i ummata xixiqqa'aa taiyfamuu qabu. ummanni keenya eega isti'maarri dur irraa ka'ee, haqa isaaanii hedduu deeffatan. ammoo hangi hafe karaa jira (hayn'i abbaan barbaadu duuba jiru hin badu) jecha'aatu jiraa.
Wannin tanaan dura isiniin je'e: ummanni keenya birkii taariikha isaanii jabduu keessatti, maqaa Gaallaa'aatin nama miidhee isaanii gaalla'aan yaamamu miidhame. mee fakeessa'aaf jalqaba jaaraa islaamaa kan saddeetii 8 keessatti qabsoo isaaniii akkasuma taariikhni isaanii, kan mqaa Gaalla'aatin barreeffame, sababaa warra maqaa isaanii kana diduun awwaalametti yookaa irraanfatmetti hanga gariin warra beekkomsa himatuu naannoo Hararitti ummanni oromo'oo takkaa hin argamne je'utti. inni nama oromoon gaalla'aa miti, gaallan oromo'oo miti je'u. namni kun dubbiin isaatifii innilleen waan laalan hin qabu. inni takkaa galtu'uu takkaa diina takkaa wallaalaa takkaa dantaa wahiiti diddaa san keessaa qabaa.
Ammoo gaallan gama dhiyaatifii bitaadhatiin, warri gaafa duraa gaallan zamana dhiiraa gaarafii, godatti galchite hiree argatanii, meeshaa lolaa faranji'irraa argannaan,kan akka qawwe'ee madaafaa faa ummata gaalla'aa, warra farado'uun lolutti, duulanii biyya gaalla'aa hunda qabatanii miidhaa, jabduu biyyaafii ummatallee miidhan.diin keenyafii aadaa teenyafii afaan keenya, qabadhaa. diinifii aadaa teessan dhiisaa je'een. tokkummaa ityoopiya'aa eegu'uu jecha akka diin tokko malee diin biraa ityoobbiyaa keessatti hin dhaabbanne je'aniin.
Ammas warri Gaalla'atti roorrise wanni dalage, Maqaa gaallaa je'u tuffatuu ilmaan gaalla'aa jibiisii su`uu jecha .duuba warri oromoo gabroonfate maalif kana dalage? si maqaan kun gaafa gaallan waan gaafa afrika'aa taye hunda bulchitu, jibbamemoo gaafa isaan gabroonfaman jibbame. yoo maqaan Gaallaa je'amu Gabra jechuu kan je'an taate, gaafa gaallan isaan gabroonfattu ma'naan Gaallaadhaa mal taya? gooftaa taya jechuu.
Waa takka haa beynuu, maqaan ummata tokkoo, ummanni sun, diin tokko dura dhaabbate'eef jecha hin jibbamu. hin dhiifamu. mee, arabni, islaama dura dhaabbate'eef Maqaan isaanii wahi jibbamee. yookaa dhiifamee. akkasuma gaallan yookaa oromoon, diin islaamaa dura, yookaa diin kiristaanaa dura, dhaabbatani'iif, maqaan isaanii hin jibbamu hin darbamu.
Duuba wanni arabni aadaa gaalla'aa jaalatu'uun wajji, maqaa isaanii jibbeef, akka tokkummaan gaalla'aa hin deebineefi . maqaan haada , ummata walitti hidhuu. wanni arabni, aadaa gaalla'aa jaalatuu beynen, gaafa arabni jabhaa gaalla'aa ta carcar jabse, jahaan gaalla'aa ta asaaboot, tan mootii isaanii Fantaalle eeydu, jabhaan tun, Mootii arabaa kan (sabruddiin) je'amutti, gumaata ergite. gumaanni isaan erganiif, waan moototaan kabajan heddu'uufii, dubara babbareedaa dhibbaafii kudhan. duuba mootichi arabaa waan biraa beekhee , dubra dhibbaafii kudhan , maalif nuu ergitan? jennaanin wanni isinii ergineef , akka khudhan ati fuutee , dhibba,ashakara keetii heerumsiiftu , akka suddaa walii taanu je'aniin. jennaan mootichi arabaa wanni je'een: nuti jihaadatti jirraa waa lamarraa tokko maraxadhaa filadhaa , takkaa islaamayuu . takkaa lola. akkasitti ergaan jabhaa oromoo asaboot , asabootitti eebitee , waan mootichi je'e, hayyoota asbootitti himte. ammas ergaa biraa tan kum afur geessu, muutichatti erganii wanni je'aniin: nuti harka khenninee nama waa nu barsiisufii, nama nu bulcu, nuu ergi, je'aniin.
Akkasitti nama waa isaan barsiisu, nama diin isaan qabsiisu ergeefii, nama isin bulchu, isintu wal beekaa if keessaa filadhaa.nama afurtama barlamaanaf filadhaa, ammas nama afuur gola gubba'aatif filadhaa, aadaa teessaniin wal bulchaa. sharxii islaama hin khallafneen. yookaa islaaman wal hin dhabneen akkanatti arabni aadaa oromo'oo jaalatee, aadaa isaanitti dalagatuu isaanii, sharxii heera islaamatiin wal hin dhabneen.
Achirraa heerri oromo'oo muuxatuu jalqabe. achirraa heerri asabootitti jalqabame kun, biyya oromiya'aa hunda keessa faca'e, sababaa kanaaf oromiyaa hunda keessaa Asabootitt erganii heera haaraya barbaadanii, waan hayyoonni asaboot je'u dhagayan. sababaa hayyoonni Asaboot qondaalonni oromo'oo beekkosa isaanii guutuu sanirraatti beekkomsa islaamaa guutuu ida'ataniif jecha.
Ammoo warri gaalla gabroonfate wanni maqaa gaalla'aa jibbuuf isaatu jibbuu haqa godhata'aafii miti. akka inni maqaa buruja qabu, kan namni isa dhagaye akka inni maqaa ummata jaba'aa taye beekhu , ni beekhanii , haa tayuu wanni maqaan gaalla'aa hafuu jibbaniif, dantaa isaanitiitu san keessa isaanii jira'aafi. ammoo maqaan kun hafuun balaa isaanitti kaasa. maalif yaanni isaanii tokkummaa gaalla'aatifii tokkummaa warra isaa gabroonfatuu argamsiisuu sun gaallan waan ist'maarri isaan godhe irraanfatuudhan argama. gaallan san irraanfatuun isaanii hin mijjaayu, yoo maqaan gaalla'aa saba oromo'oo keessa jiraate. tanaaf jecha warri isaan gabroonfate sun, maqaa gaalla'aa kana, dhoowwama haa goonuu je'anii wal mariyatan. ammas wanni waliin ja'an Orom'o'oofii Gaallan maqaa ummata tokkoo tayuu haa dinnuu, akka ummanni nuti itti roorrifne sun gaallaadha malee Orom'o'oo miti jechaa, nama fudhachiifna karaa hundaan.
Tanaaf jecha warri gaallaa gabroonfate, wakka maqaan gaalla'aa dhoowwama tayu, awaajii dhawan. warri an gaallaa ifiin je'u takaa namaa ati gaallaa je'u qixaan'i isaa akkana akkana je`anii awaajan.
Duuba warri alaga'aa, ammallee warri waan beyne kan ormo'oo, ammllee warri san keessaa dantaa qabu, awaajii isti'maaraa tanaaf dibii dhawamnii, harka dhawanii afaan bananiifii, yaada isti'maaraa kana , facaasan. dabballee tayaniifii.
Yoo oromoonni, ilmaan gaalla'aa, kan amma oromumma'aan beekkaman, warra isaan gabroonfatuun, isin abbootii teenya warra walluu, warra wallaggaa warra jimmaa, warra arsi'ii , warra baalee, warra harar, warra gaalla sidaamo'oo, miidhaa jabduu miitan je'eeti, taariikhni isin barreessitaniifii, taariikhni addunyaan barreessite hundi dubbataa dubbiin sun jirtii je'anii nu gaafatan nuti warri isaan gabroonfate wanni jennuun, akkasuma isin wrri awaajii teenya dhageessan dabballoonni keenya, wanni jettaniin warri biyya isin maqaa dhooytanii sun, kan nuti fi'e abootii teessanii miti. isaan gaallaadhaa. isin Oromoo. nuti oromoo hin gabroonfanne.namni nuti gabroonfanne, Ummata badaa tokko kan gaallaa je'amuu isin oromoodhaa maaltu walitti isin hidhe. amma eegu waan akkanaa kana hin gaafatinaa.wanni maqaa Gaalla'aatin barreeffame taariikha tayuu, aadaa tayuu maymaaka tayuu geyrara tayuu, mirriysuu tayuu, weedduu tayuu, heellee tayuu wanni biraa hundi waan oromo'ootii miti jennaan. akkana je'eeti isti'maarri Gaalla'aafii oromoo adda muruu fedha. faana. balleessaa isaanii dhoyfatu'uu jecha. haa tayuu namni ilmaan oromo'orraa isaan dhugo'oosu hin jiru. maalif wanni oromoonni beekhee yaadu , gallaan abbootii teenyaa mitii yaadun ,Taariikha Oromo'oo, kan maqaa gaalla'aatin barrffamee argame hunda didu. ammallee dachiin maqaa gaalla'atti hidhamte takkaa gaallaa walloo gaallaa shawa'aa faan, dachii oromo'ootii mitii yaadu. oromoonni ar'a alaa dhufanii yaaduu. duuba eenyu mee namni waan kana eehamu? oromoon wanni yaaddu : (gaallan, ilmi ormaa, oromoon , ormi , aaraam iram, wadaay) hundi, maqaa isaaniti. wanni maqaa isaanitiin dhufe hundi , kan isaaniti, taariikha tayuu, waan biraa tayuu . hiikkan alagaan maqootii teenyaf keessu, takkaa hiiytu oromoo biratti, hin fudhtamu. maqaan ummataa akkuma dhagayametti qeebalama yookaa fudhatam. maqaan ummataa heddommaatun, fafaa miti. yaroo takka maqaan tokko, maqootii ummataa keessaa mul'atuun, taariikhni isaan bareeffamuun, waanuma jiru. warri misraa kan amma araba misraa je'amu, dur qibxii, ammallee faraa'ni naa je'amuu turan.ona yookaa araddaa maqaa faraa'ina'aatin dachii jalatti awwaalamte, qotanii , baasaniiti dhaaddataniin.
Obboleeyyan keenya taariikha biyya teenyatiifii taariikha ummata keenya jabeessun nurratti jira. an waanan quba qabu, garii taariikhaa, kan ummata keenyafii, dachii teenya keessatti argame waan dhuga'aa isin yaadachiise.
Waa takka namuu haa beekhuu:
Taariiikhuma jechuun bar waan dabre himuu
hamaadhafii gaarii waanuma argamuu
Ammas wanni beekhun nurra jiru: diinni, yookaa nyaabni ummataa, taariikha ummatarraa waan hamtuu malee, waan gaarii hin himu, ummata qalbii caphsu'uu jecha. akka ummanni sababaa waan isaan kijibaan odeessaniif jecha, if jibbee, maqaa ifii jibbee akka waan takkaa biyya sanitti hin argaminii if seye, hanga ummnni keenya maqaa tokko, kan yoo yaamamaniin ummanni hundi maqaa keenya je'ee, owwaatu dhabe, takkatti. yoo maqaa gosaa takkaa, maqaa dalaga'aa taate malee, gaafas maqaan bakka hundatti dhagayamu, kan kitaabban taariikhaa keessatti bareeffame, kan dachiin isaani isatti qindeeffamte, maqaa gaalla'aati. sanumaan wajjin yoo ati gaallaa jetteen an gaalla'aa miti. inumaa si dhawu'uuf sitti utaala, haatayuu Rabbiin naa laaffisee, radiyoonarra maqaa tokko qabatu'utti yaame yaamnan afaan qottu'uu malee maqaa biraa hin qeeballu hin eehamnu, je`e warri baya harar akkasittan faraqaa afaan qottu'uu jecha'aan raadiyoona Maqdisho'orraa dabarsuu ture duuba odo'on akkasitti oofuu janaraal taaddasa gabreen qundaal waraanaa kan mootummaa haylasillaase'ee, jumhuuriyyaa soomaalie'ee daaw'ii dhufee, jaallee ziyaad barree dubbisee akki je'een afaan kun afaan Gaalla'aati je'ama malee afaan qottu'uutii , miti. achirraa jaallee ziyaad xalayaa natti ergee, barnaamija qottu'uu barnaama Gaalla'aatti jirjiiraa nuun je'e, akkasitti barnaamja afaan gaalla'aa jennee, raadiyoona maqdasho'orraa dabarsuu turre.
Gaafas wannin ummata keenyan je'uu ture :
taariikha oromo' oo hunoo sinii himee
irrumaan tuttuqee yoomin hundaa himee
bar taariikhni saanii waan nama jabeessuu
bakka hundaa namuu walii haa odeessuu
kan beyne gaafatee kan beeku barsiisee
bakka hundaa namuu walumatti kaasee
biyya hundaa namuu waan f edhhu argatee
xiqqa'aa gudda'aan baraakkaan jabaatee
wanni jabaataniin harka tokko tayu
bakka hundaa namuu mariin takka tayuu
ilmaan oromoodhaa wanni saan eeggatuu
bakkuma marattuu harka wal qabatu
abbaan saanii tokkoo afaan saanii ajjii
ammas hundi saanii waliin qaban hujii
taariikhni oromo 'oo tokko tayuu garree
ee maa bakka hundaa isaan walin barree
maqaan saanii tokko dachiin saanii takaa
mee namni akkanaa rakookkamiin arkaa
yaa ilmaan oromoo dubii too dhagayaa
maqaafii afaanin harka tokko tayaa
namni afaan keetii inni shannyii teetii
qoqqoteen gaafatin maali goost teeti
dhiisaa maqaa gosaa ka dhiyoo argamee
isa dur qabdhaa kan akkaan baramee
bar maqaan durattii isaawwali – qqabaa
gosa sabaa hundaa taariikhs ni qabaa
yoo isin wal taatan xiqqa'aafii gudda' aanii
dhiirafii dhalaadhan walis jaalattanii
baraa nam tokkolleen isin duran bayuu
dhiirummaa teessanis namuu haa dhagayuu
qananiin teessanii isunuu beytanii
biyya teessan jaaraa bakkuma jirtanii
waa takka haa beekhuu bakka hundaa namuu
kan oromoo miidhuu numa miidha namuu
nam tokkolleen isaan miidhuu waan dandayuu
oromoon feenee biyyarraa haa bayuu
kan oromoo mormoo takkaayuu diinumaa
takkaayuu galtu'uun sudaatinanaa homaa
oromoon guddinaa nama hundee qabuu
nama heddumminaaf dachii gudoo qabuu
kan isin guddisee gooytuma keessanii
takkaan galchaa mee Waaqa keessanii
kan isin kabajuu galata argataa
namni isin tuquu borutti rakkataa
yaa Rabbi jabeessii gaallaa islaamattii
walis jaalachiisii bakkuma hundatti
dilii teenya hundaa mee nuu araaramii
Muhammadii je'ee mootiilma aadamii guddinas da'ii nagayalee buusii
nabiyyiidharrattii jaalalleetti aansii
waanuman dubbadhes nama jaalachiisii
adhafii gaarii addumaan beysisii
Dr Mohammed rashaad kabiir abdullee
Copyright © 2008 rashaad All rights reserved.
filadhu : asirraa bakka filadhu bakka rashaad Bilisummaa islamsun raddadi naseej islamway yahoo ayna islamsun fastdir Hotmail OrOmO MsN